Njikarịcha Windows | January 2020
Diski diski na Utorrent: diski na-agbanye 100%, otu esi belata ibu?
Ezi ehihie A na-arara ọkwa nke ụbọchị a na diski ike mpụga Seagate 2.5 1TB USB3.0 HDD (kachasị mkpa, ọbụghị ụdị ngwaọrụ ahụ, kama ụdị ya.), Post nwere ike bara uru nye ndị niile nwere HDD. Na nso nso a, ọ bụ onye nwe ụdị diski dị otú ahụ (n'ụzọ, ego maka ihe nlereanya a adịghị ọkụ, nke dị elu, na mpaghara nke 2700-3200 rubles.
Kedu esi ewepu melite na Windows 8?
Site na ndabara, emelite mmelite agbanwuru na Windows 8. Ọ bụrụ na kọmputa na-arụ ọrụ na-ejikarị, ọ dịghị ntinye ọrụ nhazi, na n'ozuzu ọ dịghị emekpa gị ahụ, ịkwesịrị ịmepụ mmelite akpaka. Mana ọtụtụ mgbe, maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọnọdụ dị otú ahụ nwere ike ime ka usoro arụmọrụ siri ike.
Esi gbanwee mkpebi nyocha ihuenyo? Ịhọrọ mkpebi dị mma
Ezi ụbọchị! Ọtụtụ ndị ọkachamara ghọtara ihe niile n'okpuru mkpebi dị ka ihe ọ bụla, ya mere tupu ịmalite ikwu banyere ya, Achọrọ m ide okwu ole na ole nke mmeghe ... Ntu ihuenyo bụ ikwu okwu ọnụ ọgụgụ nke ihe oyiyi na mpaghara ụfọdụ. Ihe ndị ọzọ - nkọwa doro anya na ka mma.
Usoro kachasị mma maka nhichacha + njikarịcha + mmezigharị kọmputa. Ahụmahụ aka
Ndewo Onye ọ bụla na-ahụ maka kọmputa chọrọ ka "igwe" ya rụọ ngwa ngwa n'enweghị njehie. Ma, ọ dị mwute ikwu na nrọ anaghị emezu mgbe niile ... Ọtụtụ mgbe, ị ga-enwe nsogbu, mgbagwoju anya, nkwụsịtụ dị iche iche, na ihe ndị ọzọ. N'isiokwu a, Achọrọ m igosi otu mmemme na-akpali akpali nke na - enye gị ohere iwepu ọtụtụ nsogbu kọmputa otu ugboro!
Otu esi ebugharị "nchekwa m", "Desktọpụ", "Foto m" na Windows 7?
Ọ na-abụkarị ihe siri ike ịgafe nchekwa "My Documents", "Desktọpụ", "Foto ndị m", "My Videos". Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-echekwa faịlụ na nchekwa dị iche iche na ụgbọala D. Ma ịkwagharị nchekwa ndị a ga-enye gị ohere iji njikọ ngwa ngwa site na onye nyocha. N'ozuzu, usoro a dị nnọọ mfe ma dị mfe na Windows 7.
Mmemme mmalite na Windows 8, otu esi hazie?
Ebe m jiri Windows 2000, XP, 7 sistemụ arụmọrụ, mgbe m gbanwere Windows8 - iji mee ihe n'eziokwu, enwere m mgbagwoju anya banyere ebe bọtịnụ "mmalite" na bọtịnụ arụmọrụ. Kedu ka ị ga - esi tinye (ma ọ bụ wepụ) ihe omume na - enweghị isi site na autostart? Ọ na-apụta na Windows 8 enwere ọtụtụ ụzọ isi gbanwee mmalite.
Kedu esi gosipụta faịlụ zoro ezo na usoro usoro?
Na ndabara, sistemụ arụmọrụ Windows anaghị egbochi ike ịhụ faịlụ zoro ezo na usoro usoro. A na-eme nke a iji chebe arụmọrụ nke Windows site n'aka onye ọrụ na-enweghị uche, ka o wee ghara ihichapụ ma ọ bụ gbanwee faịlụ dị mkpa dị na mberede. Mgbe ụfọdụ, Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịhụ faịlụ zoro ezo na usoro usoro, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ehicha ma na-achọpụtakwa Windows.
Nke mbụ, ka anyị buru ụzọ ghọta ihe ndekọ ahụ bụ, ihe ọ bụ maka, na mgbe ahụ, na otu esi ehicha ma mee ka ọ ghara ịdị ọcha. Ndekọ usoro bụ nnukwu nchekwa data Windows nke ọ na-echekwa ọtụtụ ntọala ya, nke mmemme na-echekwa ntọala ha, ndị ọkwọ ụgbọala, na eleghị anya ọrụ niile n'ozuzu.
Ndenye zoro ezo na Windows 7
Ọtụtụ ndị na-amaghị ọrụ na-amaghị otú ị nwere ike isi zoo nchekwa na faịlụ site na prying anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nanị na kọmputa, mgbe ahụ ụdị ihe a nwere ike inyere gị aka nke ọma. N'ezie, mmemme pụrụ iche dị mma karịa na ị nwere ike zoo ma debe paswọọdụ na folda, mana ọ gaghị adị mgbe niile iji wụnye mmemme ọzọ (dịka ọmụmaatụ, na kọmputa na-arụ ọrụ).
Kedu ka esi eme ka ụgbọala C dịkwuo mkpa maka ịkwọ ụgbọala D?
Ndewo, ezigbo ndị na-agụ pcpro100.info. Mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ Windows, ọtụtụ ndị ọrụ kewara diski ike na ngalaba abụọ: C (na-emekarị ruo 40-50GB) bụ nkewa usoro. Eji ya iji wụnye sistemụ arụmọrụ na mmemme. D (nke a gụnyere ihe niile fọdụrụ diski diski) - a na-eji disk a maka akwụkwọ, egwu, ihe nkiri, egwuregwu, na faịlụ ndị ọzọ.
O doro anya na onye ọ bụla maara otú e si sụgharịa mkpesa PC - kọmputa nkeonwe. Isi okwu a bụ nkeonwe, n'ihi na onye nke ọ bụla ntọala OS ha ga-adị mma, onye ọ bụla nwere faịlụ nke ya, egwuregwu ndị ọ na-agaghị achọ igosi ndị ọzọ. Ebe ọ bụ Ọtụtụ ndị na-eji kọmputa eme ihe, ọ nwere akaụntụ maka onye ọrụ ọ bụla.
Eleghị anya onye ọ bụla na-echeta otú kọmputa ha si arụ ọrụ mgbe a kpọpụtara ya na ụlọ ahịa ahụ: ọ gbanwere ngwa ngwa, ọ kwụsịghị, ihe omume ahụ "gbapụrụ". Mgbe ahụ, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, o yiri ka a dochie ya - ihe nile na-arụ ọrụ nwayọ, na-aga n'ihu ruo ogologo oge, na-etinye ọnụ, wdg. N'isiokwu a, m chọrọ ịtụle nsogbu nke ihe mere kọmputa ji agbanye ogologo oge, ma ihe a ga-eme na ihe a niile.
Kedu esi gbanwee usoro faịlụ site na FAT32 na NTFS?
N'isiokwu a, anyị ga-ele anya otú ị nwere ike isi gbanwee usoro faịlụ FAT32 na NTFS, nakwa na ụzọ niile data na diski ga-anọgide na-emebi emebi! Iji malite, anyị ga-ekpebi ihe usoro faịlụ ọhụrụ ahụ ga-enye anyị, na ihe mere n'ozuzu nke a dị mkpa. Were ya na ịchọrọ ibudata faịlụ karịrị 4GB, dịka ọmụmaatụ, ihe nkiri dị mma, ma ọ bụ ihe ngosi DVD.
Kedu esi ehichapu kọmputa gị site na faịlụ na mmemme?
Ekele ndị niile na-agụ na blog! N'oge na-adịghị anya, n'agbanyeghị otú ị si edebe "iwu" na kọmputa gị, ọtụtụ faịlụ na-enweghị isi na-apụta na ya (mgbe ụfọdụ, a na-akpọ ha faịlụ ndị njide). Dịka ọmụmaatụ, ha na-apụta, mgbe ị na-wụnye mmemme, egwuregwu, na ọbụna mgbe ị na-eme nchọgharị na ibe weebụ! Site n'ụzọ, oge na - aga, ọ bụrụ na faịlụ ndị ahụ jikọtara nnukwu ihe - kọmputa nwere ike ịmalite ịda mbà (otu esi eche echiche maka sekọnd ole na ole tupu i mebie iwu gị).
Kedu ka esi eme ka nchekwa nchekwa dị na faịlụ na-eme mkpọtụ?
Iji malite, ọ dị mkpa iji kọwaa nkenke echiche nke isi ihe nchekwa na nchekwa faịlụ. File paging bụ ebe na diski diski nke kọmputa na-eji ya mgbe ọ na-ezughị RAM. Ebe nchekwa dị iche iche bụ nchịkọta nke RAM na faịlụ paging. Ebe kachasị mma ịtọ faịlụ swap ahụ dị na nkebi ebe anaghị etinye Windows OS gị.
Onye ọrụ ọ bụla nwere ọtụtụ mmemme arụnyere na kọmputa ha. Na ihe niile ga-adị mma, ruo mgbe ụfọdụ n'ime mmemme ndị a amaliteghị idebanye aha ha onwe ha. Mgbe ahụ, mgbe kọmputa na agbanwụrụ, njigide amalite ịpụta, akpụkpọ ụkwụ PC ruo ogologo oge, njehie dị iche iche pụta, wdg. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-ebugharị na-adịkarịghị mkpa, ya mere, nbudata ha oge ọ bụla i tinyere kọmputa ahụ adịghị mkpa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Njikarịcha Windows 2020